R/W: Saacid oo la marsiin waayay Faarax C/Qaadir. "XOG" - Caasimada Online
Home Warar R/W: Saacid oo la marsiin waayay Faarax C/Qaadir. “XOG”
R/W: Saacid oo la marsiin waayay Faarax C/Qaadir. “XOG”
Ra’iisul wasaaraha Somalia Cabdi Faarax Shirdoon ayaa waxaa uu golahahiisa Wasiirada ka saaray Farax Cabdiqadir oo ka mid ahaa Xisbiga nabada ee uu hogaamiyo Madaxweyne Xasan Sheikh, ahna hogaamiyaha kooxda Damul Jadiid.
Sida dad badani la socdeen xulista golaha wasiirada ayaa waxa ay qaadatay waqtigi ugu dheera ee lagu soo xulo gole wasiiro oo ay yeelato Somalia.
Dib u dhaca ku imanayay markasta Magacaabida golaha wasiirada ayaa waxaa u sabab ahaa kala fikir duwanansho dhex taalay Madaxweynaha iyo R/wasaaraha Somalia.
R/wasaare Saacid ayaa asagana ku qasbanaaday in uu ka soo fuuqo beeshi uu la rabay in ay noqoto Wasiirka labaad ee ay beesha hawiye heshay waxana uu ogoladay in beesha Xawaadle la siiyo Wasiirki la isku haystay mar hadi Madaxweyne Xasan Sheikh uu ka tagay Saxiibkiisa qali ah.
Dhanka kale R/wasaare Saacid ayaa waxaa uu ku adkaystay in Golaha Wasiirada ay qaybsadaan 3 Xisbi 1 -Xisbiga Nabada 2 -Xisbiga Tayo- 3 Xisbiga Rajo Forum.
Ugu danbeyn dad badan ayaa waxaay qaban in Madaxweyne Xasan Sheikh uu ku dag dagay magacaabida uu R.wasaare Saacid u magacaabay xilka Wasiirka kowaad ee Somalia waxana lagu macnaynaya in Saacid u yahay shaqsi ad adag oo aan la jaan qaadi karin Madaxweyne Xasan Sheikh